खेलाडीको ‘लक डाउन’ डायरी - सबै खेल
खेलाडीको ‘लक डाउन’ डायरी
१४ चैत्र २०७६, शुक्रबार १५:५१ March 27, 20200Comments
विश्वभर महारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै ठप्प छ । विश्वका सम्पूर्ण खेलकुद गतिविधि बन्द गरिएका छन्, अधिकांश देशमा लक डाउन गरिएको छ । नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सम्पूर्ण खेलकुद गतिविधि बन्द छन्, कोरोनाभाइरस फैलन नदिन सरकारले मंगलबारबाट लक डाउन गरेको छ । कोरोनाले खेलकुद गतिविधि ठप्प बनेपछि फुर्सदिला बनेका नेपाली खेलाडीहरु लकडाउनमा के गरिरहेका छन् त ?
नेपालको ग्लोबल आइकनका रुपमा परिचित स्टार क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने अहिले घरमै बसिरहेका छन् । सरकारको निर्णयलाई समर्थन गर्दै आफू घरमै बसिरहेको सन्दीपले इन्स्टाग्राम मार्फत जानकारी दिएका छन् । सन्दीपले घरभित्रै बसेर सुरक्षित रहन आग्रह पनि गरेका छन् ।
त्रिभुवन आर्मी क्लबका कप्तान तथा राष्ट्रिय टिमका स्ट्राइकर भरत खवास पनि ‘लक डाउन’लाई किताब पढेर सदुपयोग गरिरहेका छन् । ‘अरुवेला खेल र जागिरले फुर्सद हुँदैन थियो, त्यसैले यो समय पढेर बिताइरहेको छु,’ उनले भने, ‘परिवारका सदस्यलाई पनि समय दिइरहेको छु ।’ भरतले स्वास्थ्यभन्दा ठूलो केही नभएकार घरमै बसेर स्वस्थ रहन अपिल गरेका छन् ।
यसैगरी करातेका सुनिता महर्जन र नवीन रसाइली पनि लक डाउनमा परिवारसँग समयबिताएर रमाइलो गरिरहेका छन् । सुनितालाई यो लकडाउन व्यस्ततापछि लामो छुट्टिजस्तो लागेको छ । सुनिता र नवीन दैनिकी समारचर हेर्दै, साजिक सञ्जाल चालउँदै र परिवारसँग रमाइलो गर्दै बितेको छ । दुवैले घरमै बसेर कोरोनाबाट आफू र अरुलाई पनि बचाउन अपिल गरेका छन् ।
भलिबलकी रेश्मा भण्डारी फुर्सदको समयमा घरको काममा परिवारलाई सहयोग गर्ने र फिल्म हेरेर समय बिताइरहेकी छिन् । रेश्माले घरमै बसेर रमाइलो गर्न आग्रह पनि गरेकी छिन । साथै उनले चाँडै भाइरस निर्मूल भएमा सबैलाई सजिलो हुने र छिट्टै यो अवस्था हटोस् भन्ने कामना पनि गरिन् ।
क्रिकेट खेलाडी भुवन कार्की अहिले सम्पूर्ण काम बन्द गरेर घरमा बसेका छन्। उनले फिल्म, खेल सम्बन्धित भिडियो हेर्दै लकडाउनको समय उपयोग गरिरहेका छन्। त्यस्तै क्रिकेट खेलाडी रूबिना क्षेत्री झापास्थित घरमै छिन्। फुर्सदको समयमा उनी घरमा सम्भव भएजति शारीरिक कसरत गर्दैछिन्। यसरी फुर्सदमा रहँदा समयको सदुपयोग गर्दैै आफूमा लुकेका कला छन् भने प्रस्फुटन गर्न सकिने उनले बताइन् ।
← संकटमा कर्मचारीलाई तलब दिने खेलाडीको तलब कटौती
के हुन्छ त आईपिएल ? →
अर्जेन्टिनाका ‘लिजेन्डरी’ डिफेन्डर मास्केरानोले लिए सन्न्यास
१६ असार २०७५, शनिबार १७:४८ 0
मेलिलाको पोस्टमा रियलको आधा दर्जन गोल
२० मंसिर २०७५, बिहीबार २१:३६ 0